Guddoomiyaha Wakiillada Somaliland oo ka hadlay wadahadallada Soomaaliya, Dib-u-dhaca doorashada deegaanka, Colaadda Buuhoodle iyo arrimo kale | Berberanews.com
Home WARARKA Guddoomiyaha Wakiillada Somaliland oo ka hadlay wadahadallada Soomaaliya, Dib-u-dhaca doorashada deegaanka, Colaadda...
Guddoomiyaha Wakiillada Somaliland oo ka hadlay wadahadallada Soomaaliya, Dib-u-dhaca doorashada deegaanka, Colaadda Buuhoodle iyo arrimo kale
Hargeysa-(Berberanews)- Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland, ahna Guddoomiyaha ku-meel-gaadhka ah ee Urur-siyaasadeedka WADANI Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa markii ugu horreysay ka hadlay qaabka ay tahay inay u wadahadalaan Somaliland iyo Soomaaliya, muddo-dhaafka Golayaasha deegaanka, Colaadda gobollada Bari iyo doorashooyinka golayaasha deegaanka.
Cabdiraxmaan Cirro oo maanta khudbad dheer ka jeediyey Shirweynaha koowaad ee Urur-siyaasadeedka WADANI oo barqadii maanta si rasmiya uga furmay Huteel Maansoor ee magaalada Hargeysa, waxa uu kagaga hadlay arrimo badan oo kala duwan oo ay ka mid tahay xaaladda siyaasdeed ee dalku wakhtigan marayo, waxaanu baaq u soo jeediyey Xukuumadda talada haysa.
Guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro, waxa uu ku baaqay in muddo dheeraad ah oo ay xilka siihayaan loo kordhiyo golayaasha deegaanka, isla markaana la cayimo doorashooyinkooda oo uu dalbaday inaanay ka dib dhicin sannadkan 2012-ka. Waxa kale oo uu ka hadlay wadahadallada dhexmaraya Somaliland iyo Soomaaliya oo uu Madaxweyne Siilaanyo xalay Guddi farsamo u magacaabay.
Qaybta Khudbaddiisa uu Guddoomiyaha Wakiilladu Cabdiraxmaan Cirro kaga hadlay arrimaha colaadda, siyaasadda doorashooyinka iyo qodobbo kale waxay u dhignayd sidan:- “Colaadaha:
Ururka WADANI wuxuu qabaa in colaaddu tahay cadowga nolasha, nabadda iyo horumarka meel colaadi ka jirto nolali kama jiri karto, sidaas darteed, Colaadi nooc ay tahayba cidna dan uma aha. Xiisadaha colaadeed ee ka taagan deegaamo ka tirsan Somaliland waxaanu qabnaa in lagu soo dabaalo nabad. Waxa haboon in la fahmo inaan colaadi waxba keenayn. Nabadda la iskuma qasbo ee waa mid loo baahan yahay inay dadka ka soo go’do. Waxaynu u baahan nahay in caqligu shaqeeyo oo la ogaado in colaada wiil ku dhinto ee aanu wiil ku dhalan. Colaadi ciil mooyee caano ma leh. Markaa waxaan ku baaqayaa inaynu nabadda ka wada shaqeyno.
Sidaad la socotaan Soomaaliya bulshadda caalamka gaar ahaan wadamadda reer galbeedka ayaa u arkay khatar nabad-gelyo oo caalami ah sida muuqatana raba dalkaasi nabad lagu soo dabaalo. Sidii ku cadayd heshiiskii London waxa caalamku soo jeediyay in Somaliland iyo Somalia wadahadlaan. Wadahadalladaasi waa inay noqdaan mid Somaliland danteeda ku qotoma oo aan gorgortan laga galayn midnimada iyo madax-banaanida Somaliland. Waa in beesha caalamku ay goob joog ka ahaato wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland. Wadahadalkuna wuxuu innoo dhex-mari karaa innagoo ah laba dal oo siman oo la yidhaahdo Somaliland iyo Soomaaliya.
Ururka WADANI wuxuu aamminsan yahay in doorashooyinku u dhacaan si xaq ah oo xalaal ah, wuxuu aamminsan yahay in la hormariyo nidaamka doorashooyinka oo laga faa’iidaysto waayo-aragnimadeenii hore. Waxa loo baahan yahay in si deg-deg ah loo cayimo xilliga ay dhacayso doorashadda deegaanku oo aanay ka dambaynin dhammaadka sanadkan aynu ku jirno. Golaha Deegaanka ee hadda jooga waa in la siiyaa muddo kordhin kooban oo ku salaysan wakhtiga doorashadda la qaban karo.
Xukuumadda Somaliland waxaanu u soo jeedinaynaa wixii ku saabsan arrimaha masiirka ummadda in laga yeesho tallo qaran sidii xukuumaddu hore u samaysay ka hor tagitaankii shirkii London. Waxaan xukuumadda u soo jeedinaynaa sii wadista iyo ka midho dhalinta gogasha nabadda ee ay ku dhawaaqday.
Previous articleShirweynihii koowaad ee Urur-siyaasadeedka WADANI oo Hargeysa Ka Furmay iyo Argagaxna ku riday Ururrada Shiray iyo kuwa cayimay
Next articleMagacyada Masuuliyiinta loo doortay Hoggaanka Urur-siyaasadeedka WADANI iyo Shirweynihiisii oo maanta soo xidhmay